ပန်းသီးကို အခွံနွှာစားနေတုန်းပဲလား ....... - Hello Sayarwon
ပန်းသီးကို စားခါနီးတိုင်း အခွံနွှာ ပြီးမှ စားတတ်တယ် ဆိုတဲ့ သူလေးတွေ ရှိလား ……. ဒါဆိုရင်တော့ အခုကစပြီး ပန်းသီးကို အခွံနွှာ မစားနဲ့တော့နော်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ပြောရတာလဲဆိုတော့ ဆောင်းပါးလေးထဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ပန်းသီးကို အခွံမနွှာဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လို စားမလဲ …….
ပန်းသီးကို အခွံမနွှာဘဲ စားတာက ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းသီးမှာ ရောင်းပန်းလှအောင်ဆိုပြီး ပြောင်ပြောင်လေး ဖြစ်နေစေဖို့ ဖယောင်းသုတ်ထားတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် လူအများစုက ပန်းသီးကို အခွံနွှာ စားကြတာပါ။ ပန်းသီးအခွံက ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်ဆိုတော့ ပန်းသီးအခွံက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အရာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ပန်းသီးကို ဆားရည်ထဲမှာ စိမ်ပါ။ စက္ကန့် ၂၀ ကနေ ၁ မိနစ်လောက် ဆေးကြောပါ။ ပြီးရင် အဝတ်စသန့်သန့်မှာ ရေနွေးဆွတ်ပြီး အခွံက ဖယောင်းတွေကို ပြောင်စင်အောင် သုတ်ပစ်ပါ။
ပန်းသီးကို အခွံနွှာ စားနေတုန်းပဲလား …….
ပန်းသီးကို အခွံနွှာ စားနေတုန်းဆိုရင်တော့ အခုကစပြီး မနွှာစားနဲ့တော့နော်လို့ ပြောရတာက အခုလို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေနိုင်လို့ပါ။ ပန်းသီးအခွံမှာ quercetin လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်း တစ်မျိုး ပါဝင်နေတာကြောင့် ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ မပျက်စီးစေဖို့ ကာကွယ်ပေးပြီး မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးသလို အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းစေပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ပန်းသီးခွံဟာ အူမကြီးကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာတို့လိုမျိုး ကင်ဆာရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးခွံမှာပါတဲ့ triterpenoids က ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ဆက်မပြန့်စေဖို့ တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပန်းသီးခွံမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေက နှလုံး ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ် မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးတယ်
လေ့လာမှုတွေအရ ပန်းသီးခွံဟာ အခြား သစ်သီးတွေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထက် ပန်းနာရင်ကျပ် ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်တော် ပန်းသီး တစ်လုံးမှာ အမျှင်ဓာတ် ၅ ဂရမ် ပါဝင်နေတာကြောင့် တစ်နေ့တစ်လုံး ပုံမှန် စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို ပေါင် ၂၀ လျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။
ပန်းသီးခွံက အဆုတ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးခွံကို စားပေးတာက အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ပန်းသီးခွံက တံထွေး ထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ခံတွင်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သလို သွားပိုး မစားအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွားတွေကို ဖြူဖွေး ကြံ့ခိုင်စေနိုင်ပါတယ်။
ပန်းသီးခွံ မှာ ဗီတာမင် C ပါဝင်နေတာကြောင့် ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် A နဲ့ choline ပါဝင်နေမှုကလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆဲလ်သစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် C ပါဝင်နေမှုက အသားအရေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် C က ကော်လာဂျင် ထွက်ရှိအောင်လည်း လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
ဗီတာမင် A ပါဝင်နေမှုက အမြင်အာရုံ ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ ပန်းသီးခွံ က ဗီတာမင် A အတော်လေး ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါ။ မုန်လာဥနီ မကြိုက်ဘူး။ အမြင်အာရုံလည်း ကျန်းမာချင်တယ်ဆိုရင် ပန်းသီးကို အခွံမနွှာဘဲ စားပေးပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သွေးနီဥဆဲလ်တွေ နည်းလာတဲ့အခါ သွေးအားနည်းလာပါတယ်။ သွေးနီဥဆဲလ်တွေ နည်းလာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက သံဓာတ် အားနည်းတာကြောင့်ပါ။ ပန်းသီးခွံက သံဓာတ် ပြည့်ဝတာကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပန်းသီးခွံမှာ အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် အူတွေ ကျန်းမာစေပြီး အစာခြေစနစ် ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးသလို ဝမ်းမှန်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ပန်းသီးခွံ က နှလုံးသွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေသလို၊ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပါတယ်။ သွေးတိုးကျစေသလို ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို မပြန့်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင် ကြွယ်ဝမှုက နာတာရှည်ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကဲ ……. ပန်းသီးခွံ က အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ များတယ်ဆိုတော့ ပန်းသီးကို အခွံပါ စားသင့်ပြီ ဟုတ် …….. အခုကစပြီး ပန်းသီးကို အခွံနွှာ မစားနဲ့တော့နော်။
6 amazing health benefits of apple peel https://www.thehealthsite.com/fitness/diet/6-amazing-health-benefits-of-apple-peel-627499/ Accessed Date5October 2021
Apple Peel health benefits https://www.healthbenefitstimes.com/apple-peel/ Accessed Date5October 2021